Iingubo zokugubha ngokuhlwaya kunye nefomati (40 photo)
Juni 21, 2018 Dianne Reeves Uyilo
Iingubo zokuhlwa ngokuhlwaya kweentyatyambo ziya kukuvumela ukuba ubonise isitayela sakho. Khetha iingubo ezikhethiweyo kunye neprinting floral kwaye ubonise uhlangothi lwakho oluthandanayo kunye nesambatho seentyatyambo zokufumana iziqu okanye iziganeko ezikhethekileyo. Amantombazana anikezwa iimpahla zokugqoka kunye nemikhono emfutshane kunye namabala amancinci kumaphupha okanye i-lace, kunye namanqatha, iingubo ezimhlophe zemijimethri engenamikhono. Iingubo zokutshata ukusuka kwingwe kunye neengubo eziqhelekileyo zeengubo ezimbini zenza ukubonakala kwezobugcisa zanamhlanje, ezifanele iisokisi. Izigqoko ezingaphenduliyo, iimpahla zokugqoka, kunye nezigqoko zokugqoka ngexesha elide zi-chic kwaye ziyingqayizivele. Ngeendlela ezininzi ezinokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukukhetha enye ingubo.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-1,982, ukutyelelwa kwe-3 ngosuku)
Iingoma ezinobungozi malunga nendlela yokuphila enempilo, esiyikholelwayo ngenxa yezizathu ezithile
Ukuhlobisa iJardin kunye nefenitshala kwiibhloko zekhonkrithi
Imizobo yelitye: Ukuphuhlisa ukucinga
I-flower manicure: indlela epheleleyo yehlobo!
Sithunga ingubo (yokugqoka): izitayela ezifashiniweyo zehlobo!
Post Previous:"Indawo yokuhlala" yiMalevich ithengiswa kwintengiso kwiLondon ye-10,4 yezigidigidi zeedola
Okulandelayo Post:I-Yefim Topal ngumnini we "Maye siye kudla": akufuneki kubekho indawo yokutyela apha
Хабиб бер мухамедов uthi:
Oktobha 8, 2018 kwi-7: 44 pm
Ihlobo lifikile - amantombazana ahamba ngeenxa zonke emhlabeni ... (9)
Izikhokelo zokwenza iintyatyambo zamaphepha (8)
I-pedicure yohlobo lwehlobo: I-30 imibono yeholide (7)